शहिदलखन गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट बितरण थाल्यो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
शहिदलखन गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट बितरण थाल्यो
Published On : १५ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:५४
आर्थिक पारदर्शिता र शुसासन कायम गराउन भन्दै गोरखाको शहिदलखन गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट बितरण थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य तीन हजार एक सय ९१ जनाको करिब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक मार्फत पठाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
‘हरेक वडामा पाएक पर्ने गरी बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा रकम बितरण सुरु गरेका छौँ’ गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले भने । उक्त गाउँपालिकामा यस अघि समाजिक सुरक्षा रकम वडा कार्यालय मार्फत बितरण भएको थियो । ‘यो चौमासिक असार देखि कात्तिक सम्मको सामाजिक सुरक्षा रकम बैंक मार्फत दिन थालेका हौँ’ थापाले भने ।
वडा नम्बर १, २, ३ र ४ को ग्लोबल आइएमी बैंक मार्फत र ५, ६, ७, ८ र ९ को प्राईम बैंक मार्फत बितरण गरिने उनले बताए । ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा मनकामना, कुरिनटार, गोरखा र खैरेनीमा रहेको छ भने प्राईम बैंकको गाउँपालिका केन्द्र, गोरखा सदरमुकाममा रहेको छ । ‘धेरै ठाउँमा शाखा रहेको बैंक भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन स्थानीयलाई पाएक पर्ने गरी ब्यवस्थापन गरेका छौँ’ उनले भने ।
९० वर्ष उमेर माथिका वृद्ध र पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई बैंकले घरैमा गएर सामाजिक सुरक्षा रकम बितरण गर्ने सम्झौता भएको गाउँपालिकाका पञ्जिकरण अपरेटर सोम आलेले बताए ।
७० वर्ष माथिका सबै, ६० वर्ष माथिका दलित, एकल महिला, ५ वर्ष मुनिका दलित बालवालिका र पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुलाई अहिले स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा रकम बितरण गर्दै आएको छ । घटना दर्ता चुस्त राख्न, दोहोरोपन आउन नदिन पञ्जिकरण बिभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण बैंकबाट गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।
आएपछि स्थानीय तहहरुले बैंकबाट बितरण गर्न थालेपछि अधिकासंले अझै वडा कार्यालय मार्फत भत्ता बितरण गर्दै आएका छन् । केही पालिकाले बैंक मार्फत बितरण गरेपनि नियमित गर्न सकेका छैनन् ।